सरकारले बढायो सार्वजनिक गाडीको भाडा : अब कहाँ जान कति लाग्छ ? (सूचीसहित) - fairnepal.net
अर्थ बजार समाचार समाज
सरकारले बढायो सार्वजनिक गाडीको भाडा : अब कहाँ जान कति लाग्छ ? (सूचीसहित)
FN May 17, 2022	No Comments
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै भाडादर बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सरकारले बढाएको भाडादर यही जेठ ४ गतेदेखि लागु हुनेछ ।
विभागका अनुुसार अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुवाहकतर्फ ३.५ प्रतिशत भाडा बढेको छ ।
यस्तै, पहाडी बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनमा ४.६ प्रतिशत र तराईका बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारीमा ५.१ प्रतिशत भाडा बढेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उनले सो प्रस्ताव पेस गर्दै विनियोजन विधेयक, २०७९ मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, विनियोजन कुशलता र मितव्ययितालगायत सिद्धान्त र प्राथमिता रहेको उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न जेठ ५ गतेको समय निर्धारण गरेका हुन्। राष्ट्रियसभाको अर्काै बैठक यही जेठ ५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
नौ महिनापछि हट्यो संसदको अवरोध
नेकपा एमालेले गत वर्ष भदौ २३ गतेदेखि जारी राखेको संसद् अवरोध फिर्ता लिएको छ । पार्टीका उपमहानसचिव प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोस्ट्रमबाट धारणा राख्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताएका हुन् ।
बैठक सुरु भएलगत्तै प्रदीप ज्ञवालीले देश नयाँ कोर्समा गएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट उत्पन्न भएकाले संसद अवरोध खोल्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले आफ्नो पार्टीका असन्तुष्टिहरु कायम रहेको भन्दै विरोधको स्वरुप बदल्ने जानकारी दिए । उनले देशको अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकटबारे गम्भीर छलफल गर्न संसद खोल्नु जरुरी भएको बताए ।
उनले आफ्नो दललाई विभाजन गरेर जानेहरुलाई जनताले उचित ढंगले फैसला गरेको बताए। उनले जनताको त्यही फैसलालाई शीरोधार्य गर्दै अवरोध फिर्ता लिएको उनले बताए।
भन्सार एजेन्टको परीक्षा वैशाखमा
बढ्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा, कुन रुटमा कति ?
नो पार्किङमा रहेको मन्त्रीको गाडीमा ट्राफिकको “व्हिल लक”
संसदकाे एउटा बैठकका लागि २१ लाख भाडा, १० महिनामै सकियाे ११…
३३९ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम : कांग्रेस पहिलो, दोस्रोमा…
Previous Previous post: पाल्पाकाे तानसेन नगरपालिकामा गठबन्धन विजयी, ढल्याे एमालेकाे लाल किल्ला
Next Next post: ३३९ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम : कांग्रेस पहिलो, दोस्रोमा एमाले, कुन दलले कति जिते ?